‘जेलभित्र जन्मिएको छोरी मेरो सपना,मेरो भविष्य’ - Narayanionline.com
चितवन, चैत ९ –
बिहानको साढे चार बज्दै थियो । सरु (नाम परिवर्तित) र उनकी बहिनी कोठामा सुतिरहेका थिए । बाहिरबाट ढोका खोल्नु, ढोका खोल्नु, भन्दै पुरुषको आवाज आउँछ । सरु आँखा मिच्दै बाहिर ढोकाको चुकुल खोल्दै, ‘को होला यति बिहानै’ भन्दै ढोका खोल्छिन् । चार जना प्रहरी आएका हुन्छन् । लागुऔषध खाएर बस्ने भनेर सरु र उनको बहिनीलाई प्रहरीले हतकडी लगाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीमा लैजान्छन् ।
१९ वर्षीय सरुको चितवनको एक युवकसँग प्रेम सम्बन्ध रहेको हुन्छ । युवकलाई पनि प्रहरीले लागुऔषध सेवन गरेको भनेर पक्राउ गरी त्यही कार्यालयमा नै ल्याउँछन् । सरुको बहिनीको चाहीँ केही गल्ती नभएकोले उनलाई प्रहरीले हिरासतबाटै छोडिदिन्छन् । सरु र युवकको मुद्दा अदालतमा नै पुग्छ । अदालतबाट सरुलाई लागुऔषध सेवन गरेकोमा तीन वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना फैसला सुनाइन्छ ।
घरकी सबैभन्दा जेठी छोरी हुन् सरु । सरुभन्दामुनि १५ वर्षीय भाइ छन् । सरुले चितवनको भरतपुरमा जागिर गर्थिन् । जागिर गर्ने क्रममा नै उनको युवकसँग प्रेम हुन्छ । लागुऔषध प्रयोगकर्ताको आरोपमा उनलाई नवलपरासीको कारागारमा राखिन्छ ।
उनी सम्झिँदै भन्छिन्, ‘मेरो सपना मेरो भविष्य जेलभित्रै मसँगै प्रवेश गर्दै आएको रहेछ ।
चितवन कारागार नजिक पर्ने भएकोले उनीहरुलाई चितवनको कारागरमा ल्याइन्छ । सरु केही महिनादेखि महिनावारी नभएपछि उनले कारागारमा स्वास्थ्य अवस्था हेर्ने चिकित्सकसँग जँचाउँछिन् । उनको पेटमा तीन महिने बच्चा छ भन्ने कुरा उनलाई थाहा हुन्छ । पेटमा तीन महिनाको बच्चा छ भन्ने कुरा थाहा पाए पछि उनी पहिले त निराश हुन्छिन् । उनी सम्झिँदै भन्छिन्, ‘मेरो सपना मेरो भविष्य जेलभित्रै मसँगै प्रवेश गर्दै आएको रहेछ । एकछिन त आत्तिएँ । रातोपिरो भएँ । कसरी भएँ म गर्भवती भनेर प्रश्न पनि खडा भयो ।’
गर्भवती भएको कुरा उनलाई आफ्नो प्रेमीलाई पनि सुनाउनु थियो । उनीहरुको शारीरिक सम्बन्ध नशाको अवस्थामा भएको सरुले बताइन् । ‘मेरो पेटमा भएको बच्चा उनकै हो भन्ने थाहा भएपछि म हतारमा थिएँ, कहिले उनलाई सुनाउने ?’ सरुले भनिन्, ‘जेलभित्र मोबाइल पनि प्रयोग गर्न पाइन्थेन । उनीसँग सम्पर्कमा नभएकोले धेरै दिनपछि उनी पनि उक्त कारागारमा नै छन् भन्ने थाहा पाएँ र उनलाई बच्चाको कुरा सुनाएँ । उनी एकछिन त अचम्मित भए । मैले उनलाई त्यो दिनको कुरा सम्झाएँ । उनी खुसी भए र मलाई राम्रोसँग ख्याल राख्नु भनेर उनले सम्झाए ।’
प्रेमीको कुराले पनि सरुको हिम्मत बढ्यो । बच्चालाई जन्म दिने कुरामा उनी पुगिन् । उनले गर्भावस्थामा गर्नुपर्ने सबै जिम्मेवारी र सावधानी पूरा गरिन् तर जेलभित्र भएकोले जति अन्य महिलाले गर्भावस्थामा पाउनुपर्ने सबै हेरचाह उनले पाउन सकिनन् । उनलाई गर्भवस्थामा फलफूल, दूध, अमिलो लगायतका खानेकुरा खान मन लाग्थ्यो । उनले भनिन्, ‘जेलभित्र भएका दिदीहरुलाई परिवारले भेट्न आउँदा ल्याइदिएका खानेकुराहरु कहिलेकाहीँ दिनुहुन्थ्यो । त्यसैले मन बुझाउँथे । मेरो ध्यान धेरै बच्चाको लागि हुन्थ्यो । कसरी जन्मिन्छ होला ? मैले जन्माउन सक्छु कि सक्दिन भन्ने चिन्ता लाग्थ्यो । कहिले त रातभर निन्द्रा नै लाग्थेन ।’
उनी जेलभित्रको साना प्वालहरुबाट कारागरको गेटतिर आँखा डुलाउँथिन् । कैदीबन्दीहरुलाई परिवारका सदस्यहरुले बिहान ११ बजेदेखि बेलुका चार बजेसम्म भेट्ने समय थियो । उनी ती समयमा बाटोमा हेरिरहन्थिन् । घरबाट कोही आउन्छन भनेर सरु अपेक्षा गर्थिन् । उनले जति बाटो हेरे पनि न उनका परिवारका कुनै सदस्य आए न त साथीभाइ नै । कोही पनि नआएपछि उनको आशा पनि मरेर गए । उनले गेटमा हेरेसँगै टेलिफोनमा पनि आफ्नो लागि कसैको फोन कल आउँछ कि भनेर आश गर्थिन् । तर, उनको लागि भनेर कसैको पनि फोन कल आउँदैनथ्यो ।
बच्चा पाउन सहज हुनको लागि गर्भवस्थामा व्यायाम गर्थिन् । उनी भन्छिन्, ‘पहिला स्कुलमा पढ्दा गर्भवस्थामा आमाले सधैँ सकारात्मक कुराहरु सोच्नुपर्छ भन्थे । मैले पनि त्यस्तै गर्थेँ । बच्चा नै अब मेरो भविष्य हो भनेर सोच्थेँ । जेलभित्रबाट निस्किएपछि बच्चालाई राम्रो स्कुलमा पढाउने जस्ता कुरा मनमा खेल्थे ।’ जेलभित्र बस्ने कैदीहरुको लागि राज्यले दैनिक ६० रुपैयाँ र ७०० ग्राम चामलको व्यवस्था गरेको छ । तर, गर्भवतीको लागि भने सुत्केरी हुनु भन्दा एक महिना र सुत्केरी भएको दुई महिना गरी तीन महिना मात्रै विशेष सुविधा रहेको चितवन कारागरका जेलर कमलप्रसाद काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।
सरुलाई माघ ५ गते बिहान बेथा लाग्यो । सुरुमा उनको पेट दुख्ने त्यस लगत्तै उनको कम्मरदेखि सबै दुख्दै गएको उनले बताइन् । सरुसँगै जेल सजाय भोग्दै गरेकी एक महिलाकोअनुसार सरुलाई बेथा लागेपछि उनीहरुले जेलर काफ्लेलाई खबर गरे । सरुलाई बेथा लागेको कुरा उनका प्रेमीले पनि थाहा पाइन् ।
उनी पनि सरुलाई कसो के होला भनेर आत्तिए । सरुलाई बेथा लागेको केही घन्टापछि उनले भरतपुरको सरकारी अस्पतालमा छोरी जन्माइन् । सरु एकछिन रातो शिशुको अनुहार हेर्दै मुर्छा परेर रुन्छिन् । ‘उनको जन्म न मेरो जन्मथलोमा भयो न त मेरो कर्मथलोमा नै भयो उनको जन्म भयो म जेलभित्र रहेको अवस्थामा’ त्यो पललाई सम्झिँदै उनले भनिन् ।
सरुले व्यायाम गरेको भएकोले पनि उनको सामान्य अवस्थामा बच्चा जन्मियो । उनलाई एकदिनभन्दा बढी अस्पतालमा राख्न नपरेको जेलर काफ्लेले बताउनुभयो । सरुलाई जेलभित्रै सजाय भोगिरहेका महिलाहरुले तेल लगाइदिन्थे ।
उनका प्रेमी भने पुनरावेदन गरेर जेलबाट छुटिसकेका छन् । उनी भन्छिन्, ‘मेरो पनि मुद्दा पुनरावेदन गर्ने भनेको पैसा नभएर गरेको छैन । उहाँले त पुनरावेदन गरेर बाहिर निस्कनुभयो ।’ विवाह बन्धनमा नबाँधिकन प्रेम सम्बन्धमा नै उनीहरुको बच्चा भएकोले परिवारले स्वीकार्न नसकेको सरुले बताइन् ।
‘मैले त गल्ती गरेर सजाए पाएँ तर यो निर्दोष बच्चाको के गल्ती छ ? परिवारले उनलाई त माया गर्न हुन्थ्यो नि त्यो पनि छैन’ उनले भनिन् । कारागारमा महिला कैदीबन्दीहरुमध्ये सबैभन्दा कान्छी हुन् सरु । कारागारभित्र उनी चौथो सुत्केरी हुन् ।
कानुनअनुसार जेलभित्र जन्मेको बच्चालाई तीन वर्ष आमासँगै राखिने र त्यसपछि परिवारको सदस्यलाई जिम्मा लगाइने र परिवार नै नभए कुनै संघसंस्थामा राखिने प्रावधान रहेको छ । सरुको पनि सजाय तीन वर्ष रहेको छ भने एक लाख रुपैयाँ जरिवाना रहेको छ । सरु भन्छिन्, ‘मसँग जरिवाना तिर्ने पैसा छैन । त्यसैले एक वर्ष थप हुन्छ कि जस्तो लागेको छ, अब के हुन्छ हेरम् ।’ अहिले चितवन कारागरमा तीन बालिका आश्रित छन् ।
स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरेर छठ पर्व मनाउन प्रशासनको आग्रह
चितवनमा बोक्साको आरोपमा वडाध्यक्षलाई जुत्ताको माला, मलमुत्र खुवाउने प्रयास
पेट्रोलियम पाइपलाइन चितवनको लोथरसम्म ल्याइने, प्रारम्भिक सर्वेक्षण सकियो
युएईले नागरिक फिर्ता नलग्ने देशमाथि कारबाही गर्ने, श्रम सम्झौता रद्द गर्ने